Muva nje, ekhulwini le salon TagAz Ufake entsha imoto Vortex Estina. Izibuyekezo ngakho kakade, ngakho singaqala inhlabamkhosi isampuli.
Imoto ngokumangalisayo ivulekile, ngokomoya futhi ukonga. izakhi Lwangaphandle umzimba sleek, ngaphambili emotweni lihlotshiswe shiny Izinsimbi. Singasho ukuthi onjiniyela kanye abaklami benza umsebenzi omuhle ngokulinganayo, okwagcina kuholele ukudalwa imoto emangalisayo ngaphakathi nangaphandle.
Imodeli kungcono kakhulu kuneyokuqala. Okuthuthukisiwe kokubili umklamo kanye nezici othakazelisayo Vortex Estina. Izibuyekezo nabanikazi imoto kuleli lizwe ukusekela leli qiniso. Ukuthembeka umzimba luyanda ngokwethula ukucupha zobuchwepheshe. Lokhu kuqinisekiswa imiphumela ukuphahlazeka. Imoto ithatha ngokwanele kokubili phambili lobani imithelela.
Vortex Estina inhlangano uqhutshwa emigceni ukukhiqizwa LLC "TagAz". Izibuyekezo abanikazi ukuthi izinga Yakha kuyinto ezingeni eliphezulu kakhulu. Lokhu kusho ukuthi imoto ambalwa zokukhiqiza yethu ukuphepha version Chinese. Kuyaphawuleka ukuthi lo mdwebo wenziwa phezu wokugcina Durr ubuchwepheshe, olwakhiwa ngochwepheshe abavela eJalimane.
Imoto edayiswa 4 ngombala, ukubaluleka okuyinto kuhluka 380 kuya kwezingu-430. Ruble. samuntu Mast has a motor ivolumu kabani displacement 2 amalitha, namandla - 136 amahhashi. Ezinye izinguqulo sezifakelwe motor 1.6 amalitha kanye namandla 119 "amahhashi". A yi enhle kakhulu imoto yokuhlangana yasekhaya.
Oluhambisana kokubili omunye nomunye kanye injini ukukhwezwa ukudluliswa manual nge izinyathelo 5. Izinketho Vortex Estina ocebile ngempela. Lihlanganisa airbag futhi eziqhutshwa kagesi amafasitela side, bafudumale futhi alamu, futhi amandla ayo, kanye ube usufaka iarmrest emuva kanye no-cupholders. Lokhu akulona lonke uhlu "izinsimbi kanye kuzwakala" phezu Vortex Estina. Izibuyekezo abalandeli abaningi ukusekela imoto umshini ukhululekile futhi zisebenza kahle.
Ayikho sibi ubukeka imoto endleleni. Anakho umfutho kahle. Kufika amakhulu abahlakazekile bengaba amasekhondi 11, okuyinto ngempela umphumela omuhle. Front ukumiswa Vortex Estina ezimele futhi bakhulise - engaphansi, multirychazhnaya. Konke lokhu kunomthelela Dynamics kakhulu. Ukumiswa ubhekana uhlevane yomgwaqo, okuyinto ebaluleke kakhulu ezweni lethu.
Abakhiqizi baye bancika umklamo ethakazelisayo, imishini ocebile, kodwa futhi ukusebenza Vortex ezinhle Estina. Izibuyekezo ukukhombisa ukuthi iphutha kule wayengekho. It ngokuphelele kuyavumelana the esezithuthukiswe kanye nomnikazi asiphuthi endleleni. Vele ephelele ukuze izwe lethu!
I namuhla imoto luyasetshenziswa ngokusebenzisa umdayisi eyaziwa TagAz inethiwekhi. Vortex Estina, ukubuyekezwa okuyinto izikhathi eziningi kunokubuthwa nozakwabo Chinese, uthembisa ukuba impela imodeli inzuzo (lokhu kuzovala ukuqaliswa kwe "cherry" brand). Namuhla ezweni lakithi kukhona ishede izingxenye ezisele kulolu imoto. inkonzo yakhe kungenzeka ukukhiqiza kunoma iyiphi sikhungo TagAz.
"Peugeot Isazi": ukubuyekezwa abanikazi. Imininingwane Peugeot Isazi
Isithombo sebhiya ekhaya: izici zokupheka kanye iresiphi